Print Page - Su'aal: Dhiig ma iska shubi karaa?
Diseases and Conditions => Qaybta Su'aalaha => Topic started by: A/qadir Abdi on September 29, 2015, 12:22:04 PM
Title: Su'aal: Dhiig ma iska shubi karaa?
Post by: A/qadir Abdi on September 29, 2015, 12:22:04 PM
Asc Dr. dhakhtar baan u tegay sababtoo ah groin lymph nodes-ka oo xoga iyara bararsan wax xanuunana aan lahayn, mana muuqdo bararkoodu lkn marka la taabto ayaa la dareemayaa. dakhtarkii wuxuu ii diray dhiig. waxaan kaa badhaya buu yidhi neutropenia.dhiigii markaan iska soo qaaday waxaan u keenay warqadii ay ku qornaayeen natiijadii shaybadhku waa sawirka hose e. wuxuu igu idhi wax wayn ma qabtid lkn waxa kugu badan RBC gaaga ama dhiiga cas markaa 1 unit oo dhiig ah iska soo shub. markaa maxad igula talinaysan dr.(http://)
Title: Re: Dhiig ma iska shubi karaa?
Post by: A/qadir Abdi on September 29, 2015, 12:35:07 PM
Title: Re: Su'aal: Dhiig ma iska shubi karaa?
Post by: SomaliDoc on October 02, 2015, 11:01:27 AM
Sawirka baaritaanka aad samaysay noogu soo dir boggeena Facebook: http://facebook.com/HealthySomalia/ (http://facebook.com/HealthySomalia/)
Post by: A/qadir Abdi on October 03, 2015, 09:30:10 AM
Post by: SomaliDoc on October 05, 2015, 12:23:32 PM